Fandinihana Swing Parrot: fiaramanidina antsasaky ny drôna antsasaky ny radio | Vaovao momba ny gadget
Fanadihadiana Parrot Swing, fiaramanidina antsasaky ny drone antsasaky ny rc
Michael Gaton | | drôna, hevitra
Amin'ity indray mandeha ity izahay dia mitondra anao ny Famakafakana Swing Parrot, ilay minidrone vaovao avy amin'ny mpanamboatra Parrot ary manome antsika foto-kevitra iray izay tsy mbola hita amin'ny fitaovana hafa mandraka ankehitriny, hybrid eo anelanelan'ny drôna sy ny fiaramanidina ahafahanao manamory ny fiaramanidina miaraka amin'ny fomba fanamoriana sy amin'ny fialamboly mahaliana. . Hevitra vaovao tiana hampiasaina vaovao atolotra ho safidy manintona ho an'ireo izay maniry ankafizo ny hafainganan'ny sidina rc miaraka amin'ny fahatsoran'ny fialan-tsasatra sy ny fipetrahana drone. Ny vidiny dia € 139 ary azonao atao ny mividy azy amin'ny fipihana eto.
1 Drone + fiaramanidina, hevitra mahafinaritra
2 Parrot Swing, hybrid eo amin'ny fiaramanidina drone sy rc
3 Fanaraha-maso Flypad, fahafinaretana
4 Fahaleovantenan'ny drone sy ny mpanara-maso
7 Famaranana Swing Parrot
8 Aiza no hividianana ilay Swing Parrot?
Drone + fiaramanidina, hevitra mahafinaritra
Ny hevitra hidirana amin'ny drone sy fiaramanidina amin'ny fitaovana tokana dia toa mifanentana; Ankehitriny, ny fanamby tena ilaina dia ny mahazo samy mora ny manamory fiaramanidina roa ary izany ny tetezamita eo amin'ny sidina fiaramanidina sy ny sidina fiaramanidina dia tanterahina am-pilaminana ary tsy misy risika. Ary izany indrindra no teboka mahery an'ny Swing Parrot; amin'ny kitiho bokotra tsotra Afaka mandeha amin'ny drone mankany amin'ny fiaramanidina isika ary ny mifamadika amin'izany ary amin'ny fotoana rehetra dia manana fahatsapana fanaraha-maso 100% amin'ny fitaovana ianao ary tsy misy karazana risika.
Esorinao amin'ny maody drone ny fitaovana, azonao ny haavony ilaina, kitihoo ny bokotra amin'ny fanaraha-maso Flypad ary efa manidina amin'ny fomba fiaramanidina tsara ianao ary tsy misy fahasarotana. Avy eo, na dia manidina amin'ny maody fiaramanidina aza ianao dia azonao atao ny manindry ny bokotra hivadika ho maody drone ary hametraka moramora eo amin'ny toerana mahitsy ilay fitaovana ary manomboka manidina toa ny drone mahazatra. Feo tsotra ... Ary tena tsotra izany!.
Parrot Swing, hybrid eo amin'ny fiaramanidina drone sy rc
Ny Parrot Swing dia manao toy ny fiaramanidina rc sy toy ny drone, fa araka ny nandrasana Tsy misongadina indrindra amin'ireo hevitra roa tonta. Amin'ny haavon'ny drôna, dia tsotra ny sidiny, amin'ny ankapobeny io fomba sidina io dia natao mba hanatanterahana ny fiainganana sy ny fiakaran'ny fitaovana.
Amin'ny ambaratonga fiaramanidina rc dia tsy maintsy asongadintsika izany tsy haingana loatra, mahatratra ny hafainganam-pandehan'ny 30 kilometatra isan'ora, mitovy amin'ny fiaramanidina fehezin'ny radio fanombohana. Ka raha efa nampiasa an'io karazana fitaovana io ianao taloha dia tsy hahita zava-baovao ao amin'ny Swing.
Fa ny tena mahafinaritra dia ny fananana ny fahafaha-mankafy ny maody amin'ny sidina amin'ny fitaovana iray ihany. Tsotra ny fitsofana Drôna ary nanamora ny fampahalalan-dry zareo ny mpampiasa izany, raha manidina fiaramanidina rc kosa dia marefo kokoa satria ny olana rehetra mandritra ny fipetrahana dia mety hanimba azy. Ary izany indrindra no avelan'ny Swing Parrot; Izay mpampiasa vaovao dia afaka mankafy ny traikefa amin'ny fanamoriana fiaramanidina rc tsy misy risika ary tsy mila manatanteraka fianarana sarotra.
Fanaraha-maso Flypad, fahafinaretana
Ankoatry ny Parrot Swing, afaka nanandrana ny Flypad, ilay Remote control Parrot vaovao ihany koa izahay, izay nanaitra anay tsara tokoa. Parrot dia nokianina nandritra ny fotoana ela noho ny fanolorany ny fandefasana ny minidrones amin'ny alàlan'ny smartphone, izay tsy naharesy lahatra ny mpampiasa rehetra.
Ary farany nanapa-kevitra i Parrot fa hamarana an'io tsy fahampiana io amin'ny alàlan'ny fanombohana ny Flypad, baiko iray izay tianay manokana ary tsy isalasalana fa hanolotra ampiana an'ireo drôna marika.
Ny kalitaon'ny fahatsapana ny knob dia faharoa, miaraka amin'ny fahatsapana avo lenta. Izy io dia fanaraha-maso izay mavesatra, fa amin'ny fotoana rehetra dia manana fahatsapana ho lanja mifamatotra amin'ny kalitao sy ny hamafin'ny fifehezana isika, noho izany dia hitantsika ho zavatra tsara izany.
Fahaleovantenan'ny drone sy ny mpanara-maso
Ny Swing dia misy bateria 550 mAh izay manolotra 7-9 minitra fizakan-tena arakaraka ny maodelinao mitaingina, raha maharitra hatramin'ny 6 ora ny tobin'ny Flypad noho ny bateria 200 mAh.
Famerenana ny: Michael Gaton
Tsotra sy azo ampiharina ny fifindrana amin'ny maody fanidinana iray
Miasa tsara ny mpanara-maso Flypad
Afaka manidina tsy misy rivotra ihany
Somary miadana kely manidina toy ny fiaramanidina izy
Famaranana Swing Parrot
Ny Swing Parrot dia fitaovana mampihomehy be ary izany dia hahatonga anao hanana fotoana mahafinaritra mandritra ny fanamoriana izany. Natao ho an'ny sehatra natomboka izy io. Raha mpampiasa manam-pahaizana amin'ny sidina fiaramanidina drôna sy fiaramanidina rc ianao, dia marina fa hamela anao haniry ny hafainganam-pandeha bebe kokoa sy ny fahasarotan'ny sidina, saingy tsy izany no mpihaino kendrena amin'ireo karazana fitaovana ireo.
Aiza no hividianana ilay Swing Parrot?
Manana ny Parrot Swing miaraka amin'ny fanaraha-maso Flypad amidy amin'ny vidiny € 139,90 ianao ao amin'ny tranokala toytrónica.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » hevitra » Fanadihadiana Parrot Swing, fiaramanidina antsasaky ny drone antsasaky ny rc
HTC dia manolotra amin'ny fomba ofisialy ny HTC U Ultra sy HTC U Play vaovao hisorohana ny vokatra ratsy
Android Wear 2.0 dia ho tonga amin'ny smartwatches mifanentana amin'ny volana feb